Dhereg mooyee dhib ma ku ogtahay dadka Maraykanka! + AKHRI WARBIXIN | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dhereg mooyee dhib ma ku ogtahay dadka Maraykanka! + AKHRI WARBIXIN
Dhereg mooyee dhib ma ku ogtahay dadka Maraykanka! + AKHRI WARBIXIN
Los Angeles (Halqaran.com) – Magaalada Los Angeles waxa meel martay oo dunidu ku taqaan in ay tahay magaalo lagu ashqaraaro. Laakiin socdaal uu todobaadkan ku tagay madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayuu ku sheegay in dibjirkeeda sii badanayaa ”dumin” doono magaaladaas e, goorma ayay sidan uu sheegayo madaxweynuhu noqotay magaaladu?
Dhibta baaxadeedu intee ayey leegtahay?
Markaad tagto magaalada Los Angeles wakhti ba kugu qaadan mayso in aad aragto dad dariiqyada hurda. Dad badan ayaa habeenkii u hoyda cooshado wadooyinka agtooda laga dhisay iyo meelo aan kuba haboonayn in aadame u hoydo oo ay ka mid yihiin guryo aqallo onoobay iyo istaannada gaadiidka.
Dadka dib jirka ah ee Los Angeles ku nool tiradoodu waxay kor u kacday 30% afartii sano ee la soo dhaafay. Habeen walba qiyaastii 60,000 oo qof oo Los Angeles u hoyda ayaa dib jira, waxaana sidaa lagu ogaaday sahan ay samaysay wakaaladda daryeelka dibjirka Los Angeles.
Dibjirka Los Angeles 85% waa dad waawayn oo aan ubad lahayn, 70% waa rag 44% waa Maraykanka madow, waxaanay ka yihiin wadarta dadka ku nool magaalada Los Angels 8%.
Waxa kale oo Los Angeles noqotay dalka Maraykanka magaalada dibjirka ugu badan ee aan xarumo daryeel oo dawladdu leedahay aan u hoyani ku nool yihiin.
Shan meeloodoow meel dadkaasi waxay u hoydaan cooshado ay samaysteen.
Rubuc ka mid ahi dariiqyada ayay u hoydaaan.
30% waxay u hoydaan baabuur xumaatay oo aan dhaqaaqin.
Dhibta maxaa keenay?
Dhibaatada ugu weyn ee haysata dibjirka magaaladu waa lacag la’aan. Shaqooyinka oo mushqaayad yar bixiya iyo kirada guryaha oo aan la goyn karin.
Kala badh dadka dib jirka ahi waxay sheegeen in sababta dibjirka u yihiin tahay in ay tahli kari waayeen kiradii markii shaqo la’aani ku dhacday.
Soddonkii sano ee la soo dhaafay guryo badan oo dadka dan yarta ahi tahli karaan lama dhisin inkasta oo tirada dadka ku nool magaalada Los Angeles korodhay15%.
Taa waxa ka dhashay in kirada si xawli ah u korodho oo dad badan oo sabool ah lagu kordhiyo.
Guryo kooban oo dawladu kirada loogu jiro kabto ayaa jira, laakiin magaalada inteeda kale waa guryo dad gaar ahi leeyihiin oo qiimaha kiradooda uu sar jaro suuqa xorta ahi.
In ka badan 780,000 oo qof oo ku nool magaalada Los Angeles ayaa 90% dakhliga soo gala ku bixya kirada guryaha, dadkaas dhibaatada intaa leegi haysato ayaa iyaguna halis ugu jira in ay dibadda ku soo dhacaan.
Dhereg mooyee dhib ma ku ogtahay dadka Maraykanka!